China Twist drill, Stainless simbi chibooreso, simbi chibooreso zvishoma, simbi chibooreso zvishoma, HSS chibooreso ikakuruma, huni gomba saha fekitori uye vagadziri | Boda
Twist chibooreso, Stainless simbi chibooreso ikakuruma, simbi chibooreso ikakuruma, simbi chibooreso ikakuruma, HSS chibooreso ikakuruma, huni mugomba saha
Chigadzirwa: Yakazara Kukuya Twist Drill Bits
Inowanzo shandiswa twist drills mumusika inogadzirwa nesimbi yekumhanya (chena) uye yakaomeswa carbide (nhema nhema).
Yekumhanyisa simbi ine mashoma kuomarara, asi kuomarara kwakanaka uye mutengo wakaderera, asi haugone kushandiswa mukucheka-kumhanya. Iyo inowanzo shandiswa yezvinhu zvine yakaderera kuomarara, senge aluminium alloy, yakaderera kabhoni simbi, nezvimwe;
Cemented carbide ine kukwirira kuoma, kushoma kuomarara uye mutengo wakakwira. Inogona kushandiswa mukucheka-kumhanya-mhanya. Inowanzo shandiswa pazvinhu zvine hurema hwakawandisa, senge simbi yesimbi uye yakakwira kabhoni simbi mushure mekusimbisa.
BOSENDA Yakazara Kukuya Twist Drill Bits / Metal Drill Bits neyakajairwa maindasitiri, nyorera simbi isina simbi, simbi yakakanda, simbi yakakanda, I-danda, aluminium alloy uye zvimwe zvinhu zvesimbi. Inoratidzira mune yepamusoro mhando yekumhanyisa simbi simbi, yekupisa kupisa kurapwa, yakapinza uye yakasimba.
Zvese HSS uye zvakaomeswa carbide zvinhu, zvinogona kushandiswa kwesimbi isimbi, simbi jira, kona simbi, mhangura nealuminium nezvimwe simbi. Iyo inogaya zvachose, iine banga rakapinza, uye inopfeka yakasimba kuramba uye ine hupenyu hwakareba hwebasa. Straight shank inokodzera yemagetsi ruoko chibooreso uye bhenji vice.
Kumonyoroka chibooreso matomu akasiyana HSS zvinhu uye kubva akaoma chiwanikwa zvinhu zvinogona kushandiswa kwakasiyana simbi zvinhu nehupenyu hwavo hwakasiyana hupenyu. Iyo Cemented carbide zvinhu chibooreso bits ine yakanyanya kuomarara, yakakwira simba, yakakwira kusakara kuramba uye ngura kuramba, kwakanyanya kuita, kugadzikana uye hwakavimbika mhando.
Isu tinosarudza akakodzera twist twist drill bits kwauri zvinoenderana nezvinhu zvako zvekuchera, isu tinopa zvigadzirwa zveunyanzvi.Mumakore gumi apfuura, takatumira mabhureki edu kumakondinendi ese anosanganisira nyika zhinji pasirese, hunhu hwedu inogara iri musimboti webhizinesi redu rekubata uye isu tinogara tichisimbisa kusimbisa kwehunhu kudzora uye neshure yekutengesa sevhisi kuti tigare tichikwikwidza mumunda.
BOSENDA Twist Drill Bits inopa yakazara yakatarwa, inogutsa kuchera kwemarudzi ese esimbi zvinhu.
Pashure: Tip Tap, Chip Groove Tap, Straight Flute Machine Tap, Yakazara Kukuya Machine Taps, M35 Cobalt
Zvadaro: Woodcutting router bits, stright shank, kuveza huni, router bits
Sando yemagetsi, yemagetsi dhizaini chisel, SDS, Ma ...